China Elu mma ọkachamara etemeete ahịhịa 12pcs eriri sịntetik ntutu ọla kọpa ferrule nwa aka etemeete ahịhịa set emeputa na Soplaya | Dongmei
Ọkacha mma ọkachamara etemeete ahịhịa 12pcs eriri sịntetik ntutu ọla kọpa ferrule nwa aka etemeete ahịhịa set
Nchacha etemeete Dongshen na -enye ngwakọta nke ahịhịa etemeete - Kabuki, Foundation, & Eyeshadow Brushes; Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, Blush & ntụ ntụ ntụ.
Gaa ụlọ ahịa Dongshen nke brushes etemeete, ngwaọrụ ịchọ mma na ndị na -etinye ihe iji hụ na nsonaazụ zuru oke. Chọta ngwa mma maka ihu, nku anya, nku anya na ndị ọzọ.
Ntucha etemeete anyị nwere aka ike maka iji ya dị mfe. Ihe kacha mma kacha mma, oke njupụta dị elu, ntutu ntutu sịntetik dị elu, anaghị SHED.
Aha ngwaahịa Ọkacha mma ọkachamara etemeete ahịhịa 12pcs eriri sịntetik ntutu ọla kọpa ferrule nwa aka etemeete ahịhịa set
Ihe ntutu Ntutu isi
Ihe Ntutu sịntetik+aka osisi+ọla kọpa
Ọ ga -enwerịrị & zuru ezu mezie ncha ncha】: Ntọala a gụnyere brushes etemeete ihu, brushes anya, brushes ndị ọzọ. Ihe niile ịchọrọ maka ihu ihu dị nro na ngwa etemeete anya dị ebe a. O zuru oke maka ma ndị mbido na ndị na -ese etemeete ọkachamara.
【PREMIUM NKE KWESỊRỊ KPỌRỌ EKPERE】: Ọ dị nro, gbasapụ agbachapụ agbacha karịa ntutu nkịtị, ntutu isi adịghị mfe ịchapụ. Enweghị iwe, enweghị obi ọjọọ, dị nro na akpụkpọ ahụ, dabara maka ọbụlagodi akpụkpọ ahụ kacha emetụ n'ahụ. Enwere ike iji ya ọbụna na akpụkpọ nwa. Ọ na -enye ngwụcha nkọwa dị elu na mmiri mmiri, ntụ ntụ ma ọ bụ ntọala ude na -enweghị mmịpụta ngwaahịa ọ bụla na enweghị nkwafu.
NA -adị ogologo ogologo ogologo oge】: Site na aka ogologo, ọtụtụ ndị na -azụ ahịa na -ahụ ha n'anya n'ihi na ọ dị mfe ijide na iji karịa brushes etemeete ndị ọzọ. A na-eji aka alloy na ihe osisi eme aka ahụ. Na-adịghị amị amị, dị mfe ijide ogologo oge. A na -eji ntutu dị nro na ajị anụ eme ya nke ọma, ejiri ya mee ihe ogologo oge.
VERATILE BRUSH SET & STYLISH DESIGN Cover: Kpuchie nha na ụdị brushes niile ka ọ kpụọ ma kpụọ ihu maka akụkụ na -enweghị ntụpọ. Izute mkpa gị niile nwere ụdị ihu ihu dị iche iche, ị nwere ike mata ngwa ngwa wee chọta ahịhịa kwekọrọ. Zuru oke maka ụdị ịchọ mma niile, ntọala, ude BB, ntụ ntụ, ihe mkpuchi, iche, mmiri mmiri, wdg.
Nke gara aga: Ngwa ahịa na -ebufe ngwa ngwa nwa ojii 11pcs ntutu ewu pony ntutu etemeete ahịhịa setịpụrụ
Osote: Ọmarịcha ọkachamara etemeete ahịhịa 13pcs akpụkpọ anụ nwere mmasị na-agbanwe ewu ajị etemeete ahịhịa nwere aka osisi
Elu àgwà okomoko aja aja 12pcs eke ewu ha ...
Ọkachamara 8pcs sịntetik akpụkpọ anụ-enyi na enyi ...
Dongshen ahịhịa obi ọjọọ-free vegan sịntetik hai ...
etemeete ahịhịa setịpụrụ, Nịm etemeete ahịhịa, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete,